Ukusebenzisa i-Mortar ne-Pestle kwi-Herbs
Mortar kunye nePestle
by UPatti Wigington
Umdaka kunye ne-pestle isetyenziswe isixhobo esixhasayo abaninzi abaPagan - kunye nabanye abantu-basebenzisa ukugaya nokuxuba izithako kunye nezithako zomisiwe ndawonye ngexesha lokusebenza kwemilingo. Isetyenzi sineziqwenga ezimbini - umdaka, oqhelekileyo isitya, nangona ingaba yiplani kunye ne-pestle, egcinwe esandleni. Isiphelo esikhulu se-pestle, esakhiwe njengebhola yebhola, idla ngokukhawuleza ekuncedeni ekutyeni nasekutyunzeni iitrob, i-resins, okanye nayiphi na into enokusebenza nayo.
I-Mortar nePestle History
Okuthakazelisayo, ukusetyenziswa komdaka kunye nokuxhamla kwiintlobo zokuqala kwemifuno ngendlela yelizwe lekhemisi. IYunivesithi yaseArizona College of Pharmacy ithi, "Imbali yomdaka kunye ne-pestle ixhomekeke ngokusondeleyo nakwii-pharmacy." Izixhobo ezibiniweyo ziye zasetyenziselwa iiminyaka eziwaka, ezixhomekeke kumaYiputa asekuqaleni, zikhankanywe kwi- Ebers Papyrus , Incwadi yezobudala edala, kunye nakwiTestamente Elidala (Numeri 11: 8 kunye neMizekeliso 27:22) ... Kuyo yonke imbali ebhaliweyo, iimfucuza kunye neenambuzane ziye zasetyenziselwa ukulungiselela unyango. ikhemishri kunye neyeza. Iyeza ezixakile "zenziwe ngokukhawuleza," zenziwe ngokuzikhethela ukuba zihambelane neemfuno zesigulane.
Ininzi impumelelo kwixesha elide lisetyenzisile uhlobo oluthile lokuxuba kunye nokuchithwa kwilungiselelo lokulungisa izityalo, okusanhlamvu kunye nezinye izinto zokusetyenziswa.
Izizwe zaseMelika zaseMelika zazihlala ziquka amatye aphantsi ekulungiseleleni ukutya, zisetyenziselwe ukuchoboza imbewu, iinkozo, iinantambo kunye nokunye. Kwezinye iindawo ze-Asiya, ilitye kunye neeplanga zenziwe ngamatye yindlela ekhethiweyo yokugaya inyama ye- kebbeh , kwaye bobabini nama-Yiputa basebenzisa i-mortar kunye ne-pestle ifowuni yokulungiselela amacoca amayeza.
I-Kate Angus ye -Atlantic ibonisa ukuba enye inguqu yale sixhobo iye yajikeleza iminyaka engamawaka elishumi. Uthi, "Kuyo yonke imbali yabo ende, izidumbu kunye nezidumbu ziye zahluka ngokuphawulekayo ngobukhulu, isitala kunye nezinto eziphathekayo ngokuxhomekeke kwinjongo yabo." Ngokomzekelo, amachimisti kunye nabasokhemisti basebenzise iisethi ezincinci ze-porcelain ukuze zenze i-trituration, inkqubo yokugaya i-chemical compounds. Kwiindawo eziphakathi kweMiddle East, inyama iqhutywe kwi-kibbeh kwiindawo zokufa ezimbini okanye ezintathu ububanzi. Abantu baseCallon naseMutsun baseSalifornia, eSalinas Valley, banama-acorns nama-grains ngokudweba izinto ezingenanto. kwiintloko zeentaka ezibalaseleyo; iTain, isizwe sakwa-Caribbean, sasebenzisa amanani amancinci anesigxina esikhulu sephalli. Kodwa kunjalo, izinto eziyimfuneko zoyilo zihlala zifana: isitya kunye neklabhu, isetyenziselwa ukutyumfa nokugaya. "
EYurophu, idizayini esaziyo namhlanje njengokuba umdaka wendalo kunye ne-pestle setwe ibonakala isetyenziswe ukususela ngekhulu le-15 leminyaka. Amaphephandaba kunye nabaqhibi bezityalo basebenzise ukutshiza izityalo kunye neempuphu, kwaye abapheki bazibandakanya njengenxalenye yesidlo sazo sokutya, ukutyumleza iziqholo, izityalo kunye nezinye izithako.
Ukusebenzisa i-Mortar yakho nePestle
Beka imifuno yakho, iziqholo, okanye ezinye izinto ezomileyo kwisitya kwaye ubambe ngokuzinzileyo ngesandla esinye. Ukusebenzisa enye, bamba i-pestle. Ngokufakela i-pestle phantsi kumdaka, kwaye uyigudluze kwaye uye phambili, unako ukugawula nokudibanisa imifuno okanye ezinye izinto ukuze uphethile. Esi sixhobo esikhulu sokusebenzisa ukuba usebenzisa izityalo ezomileyo ezingaba zikhulu. Kusebenza ngokucokisekileyo ngemifuno entsha , kuba isilwanyana esikhonkcelayo siza kunceda ukukhulula amafutha abalulekileyo avela kumaqabunga.
Ukuba uya kuqala ukusebenzisa i-mortar kunye ne-pestle, ingcamango enhle kakhulu yokuba neendlela ezimbini ezahlukeneyo - ngale ndlela ungasebenzisa enye kuphela kwimifuno kunye nezinto ezinokuba zityhefu, kunye nezinye izinto ezidliwayo.
I-Mortar kunye neeseti ze-pestle ziza kwizinto eziphathekayo, kwaye ngokuqhelekileyo unokufumana enye kwindawo yesitoreji sakho sekhitshi.
Zifumaneka kwi-porcelain, imithi, i-marble, kunye nentsimbi. EMzantsi Melika, ilitye elikhulu elinelitye elibizwa ngokuba yi- molca jete lisetyenziselwa ukutshaya okusanhlamvu kunye nemifuno. Banobuhle obuhle kunye nobubanzi - ukuba usebenza nezinto ezinkulu ezifana nengqolowa okanye ingqolowa, cinga ukusebenzisa enye yale ndawo esikhundleni somdaka omncinci kunye ne-pestle.
IsiGrike samaPaganism: isiHolenic Polytheism
Ukuzikhusela Ukuzikhusela nokukhusela
Fumana yonke into nge Kiddush
Izinombolo ezine ezibalulekileyo kubuYuda
Imigangatho yePagan kunye neenkcazo
Kuthatha ixesha elingakanani ukuba uMoya woMoya usebenze?
UCSD Ifoto yoTyelelo
Doc McStuffins: Isikhokelo esigqibeleleyo kwiMpawu eziMbala
Inkcazo ye "Jahannam"
I zihlomelo zesiTaliyane
Oomama Ababulala Bantwana Babo
Indlela yokwenza amanani afanelekileyo
Imbali yeCawa yePresbyterian
Biography kaRafael Carrera
Iikhowudi zamaKristu ezikhululekileyo
Umbukiso kaPontiyo Pilato: Urhuluneli waseRoma waseJudiya
Isizathu sokuba Sigubha iNyanga yeMbali yabasetyhini
Ziziphi iimpahla ezine?
Cervantes kunye noShakespeare: Ubomi obudlulileyo, iiNdaba ezahlukeneyo
Ukusuka kwiDraw Main ukuya kwiQaji: uLert Rutledge-Fitzgerald's Storyback
Inyanga yeSagittarius (iTransit) - inyanga kunye neentleko
Iimfazwe zeNguqulelo yesiFrentshi: iMfazwe yaseCape St. Vincent
I-Evolution & Creationism Amacala eNkundla - iMbali ye-Evolution Court Cases
IziKlomelo zeZikolo eziPhumeleleyo
Izilwanyana ezininzi zisengozini yokufudumala kwehlabathi
Sri Lanka | Iinkcukacha kunye neMbali